Iphepha lealuminium elicwangcisiweyo - China Aluminium sheet sheet abavelisi, abaxhasi
Iphepha leAluminiyam elenziwe ngegolide eliCociweyo
I-Aluminium ene-Anodized yi-corrosion kunye ne-abrasion ukumelana nentsingiselo ayizukuphela, i-chip, i-peel, okanye i-flake. I-Anodizing yinkqubo esetyenziselwa ukonyusa ubukhulu bendalo ye-oxide yendalo kumphezulu wamalungu esinyithi. Yonyusa umhlwa kunye nokunxiba ukumelana, kwaye ngexesha lenkqubo umphezulu wealuminiyam odayiweyo unokudayishwa ube yimibala eyahlukeneyo.
I-aluminium ene-anodized yenziwa ngenkqubo ye-electrochemical evumela umbala ukuba ungene kwi-aluminium pores, ekhokelela kutshintsho lwangempela kumbala wobuso bentsimbi. I-aluminium ene-anodized inzima kwaye iyamelana ngakumbi ne-abrasion kunye ne-corrosion. I-Lasers ukuya kumhlophe-ish / ngwevu. Nceda uqaphele: icala elinye kuphela eliphambili kwaye likhuselekile kwimaski.
Uninzi lwee-alumum ezenziwe nge-anodized zinemibala kumacala omabini kwaye zinokuba zijikeleze, ukurhuqa idayimane, okanye okroliweyo nge-laser. Ukukrolwa kwe-Laser kuvelisa uphawu olumhlophe. I-aluminium ene-anodized ayikhuthazwa ukuba i-sublimation. I-aluminium yethu ene-anodized enemibala isetyenziswa kwizicelo zokuhombisa kwaye ayikulungelanga ukusetyenziswa kwangaphandle. Nangona kunjalo, i-satin yethu yesilivere yealuminiyam enokusetyenziselwa ngaphandle.
Iphepha le-aluminium ebhulashiweyo
Ngokusekwe kuluhlu olungasentla lwealuminiyamu, iipleyiti zealuminium zinokwahlulwa zibe ziindidi ezininzi. Umgaqo wokuqala obalulekileyo yipleyiti yealuminium.
Iphepha le-aluminium elenziwe ngombala yimveliso yentsimbi ene-aluminium sheeting evezwe yinkqubo ye-electrolytic passivation ehambisa ukhuseleko, olunxibe nzima olukhuselayo kumphezulu wayo. Umaleko okhuselayo owenziwe yinkqubo ye-anodizing eneneni incinci kunokuphuculwa kwendalo ye-oxide yendalo ekhoyo ngokwendalo kumphezulu wealuminiyam.